Mianatra manao fanesoana amin'ny sarinay izahay | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | Tutorials
Ao amin'ny lahatsoratra teo alohanianatra ny dikan'ny teny hoe mockup ary ny maha-zava-dehibe ny fampiasana azy hanolotra ny tolo-kevitray ho an'ny mpanjifa.
Raha liana hanao mockup ianao nefa tsy fantatra ny fomba hanaovana azy dia ity a tutorial amin'ireo dingana tena tsotra mba hahafahanao manao manaova mokcup anao manokana. Imbetsaka isika no tsy mahita mockups fampidinana izay mifanaraka amin'ny ilaintsika, na mandoa izy ireo ary tsy tafiditra ao anatin'ny tetibolantsika. Ho fanampin'izany, tsy maintsy tadidintsika fa ireny photomontages ireny dia ampiasaina tsara mba hampihenana ny vidiny, na fandaniana aotra. Noho izany, tsy misy dikany ny fampiasam-bola amin'izy ireo. Noho izany antony izany hampianatra anao hampiasa ny sarinao izahay.
Photoshop hanaovana ny fanesoana anay
Ny dingana voalohany tokony hatao aondraho ireo rakitra, atoro ho an'ny jpg. dia hanokatra Photoshop izahay, ny programa tsara indrindra hanaovana ny zavatra noforonintsika manokana. Hametraka ny sary izay tiantsika hanaovana ny photomontage isika.
Vantany vao misokatra ny sary dia hotaritarinay ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny latabatra fiasana, hanovana azy ireo avy eo.
Torolàlana momba ny boky
Ny dingana manaraka dia tolo-kevitra izay hanampy antsika mahazo benchmarks. Izy io dia ahitana tsipika fanovozan-tsary, izany hoe manamarika ny fomba fijery "x" sy "y" amin'ilay sary mba ahafahantsika manodinkodina ireo sary mifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny sary tompony.
Araka ny hitantsika amin'ny sary dia namboarina izy ireo tsipika marindrano sy mitsangana miloko manga hitarika anay sy hanamora ny asa.
Manana safidy roa isika, na safidio ny sary rehetra na andeha tsirairay. Rehefa voafantina dia handeha any amin'ny bara farany ambony izahay ary hanaraka ity làlana manaraka ity:
Manova - Manova - Manalavitra
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambany, azontsika atao ny manolana ireo zavatra miankina amin'ny fomba fijery tadiavintsika. Manindry sy misintona ny zorony Avy amin'ny kianja izay miseho isika dia afaka manatratra azy amin'ny alàlan'ny fitarihana azy araka izay tiantsika.
Mitandrema satria raha tena lehibe ny fanodikodinam-bola dia mety hafahafa na hanodinkodina ny vokany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mianatra manao fanesoana ho an'ny tenantsika isika
Ny maritrano mihoapampana indrindra "California Crazy"